၉၆၉ သင်္ကေတ - ဝီကီပီးဒီးယား
အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းပြီးသည့်တိုင်အောင် ကျေးဇူးပြု၍ ဤစာမျက်နှာကို မရွှေ့ပါနှင့်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကိုယ်စားပြုသော ၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ် သင်္ကေတ
"၉၆၉" အမှတ်တံဆိပ်သည် ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်တော်(၉) ပါး၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ ဂုဏ်တော်(၆) ပါးနှင့် သံဃာတော်တို့၏ ဂုဏ်တော် (၉) ပါးကို ကိုယ်စားပြုသော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည့် ရတနာသုံးပါး ကို ရည်ညွှန်းသည့် သင်္ကေတအမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်သည်။ 
၁ ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါး အဓိပ္ပာယ်
၂ တရားဂုဏ်တော်(၆) ပါး အဓိပ္ပာယ်
၃ သံဃာဂုဏ်တော်(၉)ပါး အဓိပ္ပာယ်
၄ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှုသည့် ၉၆၉
၁။ အရဟံ ဂုဏ်တော် The Accomplished One (Arahan) ကိလေသာကင်းစင်၍ အမြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း၊ လူနတ်ဗြဟ္မာတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်ခြင်ဂုဏ်။
၂။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဂုဏ်တော် The Perfectly Enlightened One (Sammasambuddho) တရားအလုံးစုံကို သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဖြင့် အလိုလိုသိခြင်း၊ ဉာဏ်ပညာအကြီး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။
၃။ ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော ဂုဏ်တော် The Endowed One with Knowledge and Conduct ( Vijjacaranaasampanno) ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ၃-ပါး(၈ပါး) ၊ စရဏ အကျင့် ၁၅ ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူခြင်း၊ အကြီးဆုံး ဝိဇ္ဇာနှင့် အကောင်ဆုံး အကျင့်ရှိသူဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။
၄။ သုဂတော ဂုဏ်တော် The Well-gone One or The Well-spoken One ( Sugata) ဟုတ်မှန် အကျိုးရှိသော စကားကို ကောင်းစွာဆိုတတ်ခြင်း၊ နိဗ္ဗာန်သို့ ကောင်းစွာသွားတတ်ခြင်း ဂုဏ်။
၅။ လောကဝိဒူ ဂုဏ်တော် The Knower of the Worlds ( Lokavidu) သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ ဩကာသလောက တည်းဟူသော လောကသုံးပါးကို သိမြင်ခြင်း ဂုဏ်။
၆။ အနုတ္တရော ပုရိသဒမ္မသာရထိ ဂုဏ်တော် The Incomparable Leader of men to be Tamed (Anuttaro purisadammasarathi) မယဉ်ကျေးသူတို့ကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမရာ၌ အသာလွန်ဆုံးဖြစ်ခြင်း ဂုဏ်။
၇။ သတ္တာဒေဝ မနုဿာနံ ဂုဏ်တော် The Teacher of Celestial gods and Human Beings (Sattha devamanussanan) နတ်လူသတ္တဝါအားလုံးတို့၏ ဆရာဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။
၈။ ဗုဒ္ဓေါ ဂုဏ်တော် The Enlightened One (Buddho) သစ္စါလေးပါးကို ကိုယ်တိုင် သိမြင်၍ သူတစ်ပါးတို့အားလည်း ဟောကြားညွှန်ပြနိုင်သော ဂုဏ်။
၉။ ဘဂဝါ ဂုဏ်တော် The Blessed One (Bhagava) ဘုန်းတော် ၆-ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူခြင်း ဂုဏ်။ ဘုန်းတန်ခိုးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။
တရားဂုဏ်တော်(၆) ပါး အဓိပ္ပာယ်[ပြင်ဆင်ရန်]
၁။ သွာက္ခာတ ဂုဏ်တော် "well proclaimed". The Buddha's teaching is notaspeculative philosophy but an exposition of the Universal Law of Nature based onacausal analysis of natural phenomena. It is preached, therefore, asascience rather thanasectarian belief system (Svākkhāto) မြတ်စွာဘုရား ကောင်းစွာ ဟောထားသည့်တရားဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။
၂။ သန္ဒိဌိက ဂုဏ်တော် "able to be examined". The Dhamma is open to scientific or any type of scrutiny and is not based on faith. It can be tested by personal practice and he who follows it will see the result for himself by means of his own experience. Sandiṭṭhiko comes from the word sandiṭṭhika which means visible in this world and is derived from the word sandiṭṭhi-. Since Dhamma is visible, it can be "seen": known and be experienced withinapersons life. (Sandiṭṭhiko) ကိုယ်တိုင်ကျင့်လျှင် ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သော တရားဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။
၃။ အကာလိက ဂုဏ်တော် The Dhamma is able to bestow timeless and immediate results here and now, for which there is no need to wait until the future or next existence. The dhamma does not change over time and it is not relative to time (Akāliko) အခါမလပ် အကျိုးပေးခြင်း၊ မဂ်ရလျှင် ဖိုလ်ချက်ချင်း ဖြစ်ခြင်းဂုဏ်။
၄။ ဧဟိပဿိက ဂုဏ်တော် "which you can come and see" — from the phrase ehi, paśya "come, see!". The Dhamma invites all beings to put it to the test and come & see for themselves (Ehipassiko) 'လာပါ၊ ကျင့်စမ်းပါ' ဟု ရဲရဲဝံဝံ ဖိတ်ခေါ်ထိုက်ခြင်း၊ အစမ်းသပ်ခံနိုင်ခြင်း ဂုဏ်။
၅။ ဩပနေယျိက ဂုဏ်တော် "leading one close to". Followed asapart of one's life the dhamma leads one on to liberation. In the "Vishuddhimagga" this is also referred to as "Upanayanam." Opanayiko means "to be brought inside oneself". This can be understood with an analogy as follows (Opanayiko) မိမိစိတ်၌ အမြဲကပ်၍ ဆောင်ထားသင့်ခြင်းဂုဏ်။
၆။ ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗ ဝညူဟိ ဂုဏ်တော် "To be personally known by the wise". The Dhamma can be perfectly realized only by the noble disciples (Budha) who have matured in supreme wisdom. No one can "enlighten" another person, each intelligent person has to attain and experience for themselves (Paccattaṃ veditabbo viññūhi) အရိယာတို့သည်နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို အသီးသီး လက်တွေ့ ခံစားနိုင်ခြင်းဂုဏ်။
၁။ သုပ္ပဋိပန္နေ ဂုဏ်တော် = လွန်ကောင်းမြတ်သော အကျင့်ဂုဏ်တော်၊ Practicing the Good (Right) Way , The disciples of the Blessed One practice well the threefold training of morality, concentration and wisdom (Suppatipanno Bhagavato Savakasamgho)
၂။ ဥဇုပ္ပဋိပန္နေ ဂုဏ်တော် = လွန်ဖြောင့်မတ်သော အကျင့်ဂုဏ်၊ Practicing the Straight Way, The disciples of the Blessed One practice righteously the threefold training ( Ujuppatipanno Bhagavato Savakasamgho)
၃။ ဉာယပ္ပဋိပန္နေ ဂုဏ်တော် = လွန်သင့်မြတ်သော အကျင့်ဂုဏ်၊ Practicing the True Way to Nibbana, The disciples of the Blessed One practice to realize nibbana ( Nyayappatipanno Bhagavato Savakasamgho )
၄။ သာမီစိပ္ပဋိပန္နေ ဂုဏ်တော် = ရိုသေအပ်သော အကျင့်ဂုဏ်၊ Practicing the Proper Way , The disciples of the Blessed One practice to be worthy of veneration (Samicippatipanno Bhagavato Savakasamgho)
၅။ အာဟုနေယျေ ဂုဏ်တော် = ဧည့်သည်ရည်မှု၊ အလှူဝတ္ထုကို ခံယူထိုက်သောဂုဏ်၊ Being Worthy of Gifts , Being worthy of receiving offerings brought even from afar ( Ahuneyyo)
၆။ ပါဟုနေယျေ ဂုဏ်တော် = လက်ဆောင်ယူငြား အလှူဝတ္ထုများကို ခံယူထိုက်သောဂုဏ်၊ Being Worthy of Hospitality , Being worthy of receiving offerings specially set aside for guests (Pahuneyyo)
၇။ ဒက္ခိဏေယျေ ဂုဏ်တော် = မြတ်သောအလှူ ခံယူထိုက်သောဂုဏ်၊ Being Worthy of Offerings , Being worthy of receiving offerings offered with the belief that the offering will bear fruits in future existences ( Dakkhineyyo)
၈။ အဉ္ဇလိကရဏီယျေ ဂုဏ်တော် = လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးထိုက်သောဂုဏ်၊ Being Worthy of Reverential Salutation ( Anjalikaraniyo)
၉။ အနုတ္တရံ ပုညက္ခေတ္တ ဂုဏ်တော် = လယ်ယာမြေကောင်းနှင့် တူသောဂုဏ်။ Being the Unsurpassed Field of Merit for the World , being an unsurpassed (incomparable) fertile field for planting the seeds of merit for the world (Anuttaram Punnakkhettam Lokassa )
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှုသည့် ၉၆၉[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာသည် ကံနှင့် ကံ၏ အကျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်၍ ရရှိသည့် အသိအမြင်ကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးထားသည့် မြင့်မြတ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှုသည့် ဘာသာတရား ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သားတော်များဖြစ်သည့် သံဃာ တော် များသည်လည်း (၂၂၇) သွယ်သော သိက္ခာပုဒ်တို့ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြရပြီး သာသနာတော် သန့်ရှင်း၊ တည်တံ့၊ ပြန့်ပွားရေးအတွက် နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ် ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။
...ဘာသာ အသီးသီးမှာ သူတို့ဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် မျိုးစောင့်ဥပဒေ(Interfaith Marriage Law ) ပြဌာန်းချက် တွေ ရှိနေတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း အလားတူ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဒီလို ကာကွယ်ဖို့ ဆောင်ရွက်တာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာ မဟုတ်ကြောင်း ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်ဖို့အတွက် မျိုးစောင့်ဥပဒေ(Interfaith Marriage Law ) တရပ် ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ.... ဟု အင်းစိန်မြို့နယ် အောင်ဆန်း တောရ တပ်ဦးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သော အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဩဝါဒ ခံယူပွဲ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သံဃာ့အစည်းအဝေးတွင် အဓိက ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါသည်။ မျိုးစောင့် ဥပဒေ မူကြမ်းကို သံဃာတော် တွေရဲ့ တိုက်တွန်းချက်အရ ရေးဆွဲခဲ့သော ဥပဒေပညာရှင် ဦးရဲခေါင်ညွန့် ကလည်း..... မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့အခါ တခြားဘာသာတွေရဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေ ကိုတော့ Statutary Law လို့ ခေါ်တဲ့ ပြဌာန်း ဥပဒေ အနေနဲ့ သတ်မှတ်ခံရပြီး မြန်မာ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်း ဥပဒေကို ကျတော့ Customary Law လို့ ခေါ်တဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအဆင့်သာ သတ်မှတ်တာကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်လာရင် သူများဘာသာရဲ့ ဥပဒေတွေကိုသာ လိုက်နာ နေရတယ်... ဟု ပြောပါသည် ။ သီတဂူ ဆရာတော် အသျှင် ညာဏိသရ က ......အခုအခါ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လို နိုင်ငံတွေဟာ တချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကို ဆောင်းပါးရှင် Henna Beach က လစ်လျူရှုခဲ့ တယ်...ဟု ဆိုသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၉၆၉_သင်္ကေတ&oldid=294968" မှ ရယူရန်	ကဏ္ဍများ: NPOV disputesAll NPOV disputesမြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝှက်ထားသော ကဏ္ဍများ: ရှင်းလင်းရမည့် ဆောင်းပါးများAll articles needing cleanup	လမ်းညွှန်မီနူး
ဗဟိုစာမျက်နှာပေါင်းကူးနေရာလက်ရှိဖြစ်ရပ်များလတ်တလော အပြောင်းအလဲများကျပန်းစာမျက်နှာအ​ကူ​အ​ညီ​လှူဒါန်း​မှု​	ပရင့်/ပို့လွှတ်
ဘယ်ကလင့်ခ်ထားလဲဆက်စပ်သော အပြောင်းအလဲများအထူး စာမျက်နှာများပုံ​သေ​လိပ်​စာ​စာမျက်နှာ အချက်အလက်များဝီကီဒေတာ itemဤစာမျက်နှာကို ကိုးကားပြုရန်	အခြား ဘာသာဖြင့်
EnglishFrançaisעבריתBahasa Indonesia日本語ਪੰਜਾਬੀPolskiPortuguêsதமிழ்ไทย中文	လင့်ခ်များကို တည်းဖြတ်ရန်	ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ မတ် ၂၀၁၆ ရက် ၀၅:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။